Soomaaliya: Maxkamad Dil Toogasho Ah Ku Fulisay Nin Lagu Eedeeyay Inuu Kufsaday, Ka Dibna Dilay Gabadh | Himilo Media Group
Soomaaliya: Maxkamad Dil Toogasho Ah Ku Fulisay Nin Lagu Eedeeyay Inuu Kufsaday, Ka Dibna Dilay Gabadh
Garbahaareey, 6 Maarij, 2019 (Himilo) – Eedeysanahan oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Cali Xaamud ayaa in muddo ah ku xidhnaa saldhigga dhexe ee degmada Garbahaareey iyadoo loo heystay dambi isugu jiray dil iyo Kufsi.
Ninkan ayaa ku eedeysnaa in gabadh yar oo lagu magacaabi jiray Xaliimo Cali Macallin Saalax oo ay da’deedu ahayd 18 sano jir uu kufsaday kadibna dilay, waxaana falkan uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Yucubleey oo qiyaastii 15 KM u jira degmada Garbahaareey.
32 sano jirkan ayay Maxkamadda degmada Garbahaareey 04-tii bishan March ku riday xukun dil ah, waxaana Shalay ay maxkamaddu fulisay xukunkaasi.
Ninkan ayaa lagu toogtay fagaare ku yaal duleedka degmada Garbahaareey, waxaana goobtii uu dilku ka dhacayay ku sugnaa masuuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasi iyo xubno ka socday maxkamadda cadaaladda degmada Garbahaareey ee Dalka Soomaaliya.
Ninkan ayaa intaan xukunka Dilka ahi lagu xukumin la sheegay inuu qirtay inuu Kufsaday isla-markaana uu isagu dilay Gabadha yar ee 18jirka ahayd.